FreeYard: July 2012
Photo Collection : 1
हरेक बर्ष झै २०६८ सालको दशैको बेला पनि बर्दघाट (नवलपरासी) स्थित आफ्नो घर गएको थियो । काठमाडौंको कोलाहल र प्रदुशणबाट पाएको दु:खलाई सम्झने हो भने त केही दिन गाउघरमा रमाईलै हुदो रैछ तर आफ्नो उमेरका साथिहरु त्यती नभएकाले अली-अली बोर पनि लाग्दो रैछ ।धेरै जस्तो साथीहरु बिदेश गएका छन भने कोही पढ्नलाई काठमाडौंमै बसेका छन् । तर यसपाली भने साथीको रुपमा एउटा कम्प्याक्ट क्यामरा थियो क्यानोनको । गएको अर्को दिन बिहान देखी नै क्यामरा लिएर हिंडे । खोला र खेतबारी चहारेर केही फोटाहरु खिच्दा ४ घण्टा बितेको थाहा नै पाएनछु । पहिलो चोटि मोबाइल नै घर छोडेर हिंडेकोले घर एकैछिन त " छोरो " कता गएछ भनेर खोजतलाश नै भएछ ।त्यसबेला खिचेका केही फोटाहरु क्याप्सन सहित यहाँ पोस्ट गरेको छु ।
Dragon fly: हाम्रो तिर यसलाई खेताला किरा भनिन्छ । यस् किरा सँग मैले कारीब आधा घण्टा बिताउदा के थाहा पाए भने खेताला किरा बसिराको ठाउमा कसैले डिस्टर्ब गर्‍यो भने त्यो भाग्दो त रहेछ तर फेरी त्यही आएर बस्दो रैछ ।
घिरौलाको फूलमा सानो पुतली जस्तो किरा
It tries. I fails. It tries again. It fails better.....but finally it climbs to the top
यस्को फोटो खिच्न खोज्दा यस्ले मलाई हेर्न त हेर्यो तर मैले बुझ्न सकिन यो उस्को निन्याउरो मुख थियो वा आफ्नै किसिमको स्माइल । तर बिचरोलाई कती पनि थाहा थिएन कि यो नै उसको अन्तिम फोटो थियो । किनकी अर्को दिन त ऊ कसैको दसैंको बोको बन्नु थियो ।
अनारको नफक्रिएको फूल
सबै कुरा रहरले मात्र गरिदैन रे ....बिहानको सात बजेथ्यो होला, कुहिरोले पछाडि देखिएको जँगल पुरै ढाकेको थियो । तर त्यही अस्पष्ट जँगल नै यिनिहरुको गन्तब्य थियो ।
Posted by Trilochan Bhattarai at 6:13 AM No comments:
लघुकथा : भोक
दिउसोको समय उपत्यकामा गर्मी ह्वात्तै बढेको थियो । सबैलाई घाम छलेर घर पुग्नै हतारो थियो । टन्टलापुर कडा घामलाई पर्खालले छेक्न खोज्दा बनेको छाया पनि गाढा नै थियो । त्यही छायाको सहारामा एउटा सानो केटो हात फिजाएर बसिरहेको थियो । बाटामा हिंड्ने आधाभन्दा बढीले त उस्लाई एक झलक हेर्न पनि भ्याएनन होला । देखेका मध्य कतिले सुस्तरी भनेका पनि होलान " यस्तो हात गोडा सध्दे भाकोले त काम गरेर खानु नि, यसरी माग्न कस्तो लाज नलागेको होला ?" तर उस्लाई यि शब्द कुनै नौलो थिएन। तर त्यस दिन सधैं भन्दा केही फरक भई दियो । एक धनाढ्य देखिने महिला उस्को नजिक आएर एकैछिन अडीइन ।ऊ छक्क पर्‍यो । ति महिलाले उसलाई आफ्नो घरमा लाने प्रस्ताव राखीन् ।एकैछिनको परिश्रम पछी बल्ल उनी सफल भइन् ।
पर्खालले घेरिएको ठुलो ५ तले घर । एउटा कार । अनी घरको नजिकै सुन्दर फुलहरु । अह ! उस्लाई कुनै चिजले आकर्शित गरेन । त्यसैले त उस्मा कुनै चमक थिएन । साझ पर्न थालेको थियो । उस्ले राम्ररी बुझिसकेको थियो ऊ त्यहा सानो तिनो काम गर्नलाई ल्याइएको हो । जसको बदलामा उस्ले मिठो खान लाउन र केही पैसा पनि पाउनेछ । खाना खाने बेला भैसकेको थियो । ति महिलाले एउटा कचौरामा मासु र भात हालेर उस्लाई दिदै भनिन ,"यो लगेर बाहिर पप्पीलाई देउ।" पप्पी , घर नजिकैको खोरमा राखेको सानो कुकुर ।घरभित्र छिर्ने बेलामा उस्ले देखेको थियो त्यो सेतो रङको खाइलाग्दो कुकुर । शायद आकर्षक र ब्यबस्थित ठाउमा कुकुरलाई राखेको देखेर होला उसले अली धेरै बेर नियालेको थियो । केटो हातमा मासु र भात भएको कचौरा लिएर पप्पी नजिकै गयो । तर त्यो दिन बिचरा पप्पी भोकै सुत्यो ।
Posted by Trilochan Bhattarai at 4:52 AM No comments: